Juan Mata Oo Sabab Layaable Iskaga Diiday Dalab Lacag Badan Oo Uu Kaga Tegi Karayay Manchester United - Gool24.Net
Juan Mata Oo Sabab Layaable Iskaga Diiday Dalab Lacag Badan Oo Uu Kaga Tegi Karayay Manchester United
Laacibka khadka dhexe ee reer Spain ee Juan Mata ayaa iska diiday dalab lacag badan lahaa oo uu ka helay koox aan magaceeda la shaacinin oo ka dhisan waddanka Sucuudiga, waxaana uu ganafka ugu dhuftay dalabkaas sabab qariib ah oo aanu hubin inay dhici karayso.
Juan Mata ayaa lasoo wariyey inuu u sheegay kooxdan inay u qorshaysan tahay in sannadka uga hadhsan heshiiskiisa Manchester United uu kula guuleysto horyaalka Premier League oo uu kusii negaado xataa iyadoo aanu boos joogto ah ka haysanin oo uu kaydka fadhiyo.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo aan fursado fiican siin jirin Juan Mata, ayaa waxa haddana uu hoos uga sii dhacayaa xulashadiisa, iyadoo ay ka horreeyaan Fred, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Nemanja Matic iyo saxeexa cusub ee Donny van de Beek,
Laba ciyaarood oo uu ugu soo bilowday Red Devils, waxa uu laacibka hore ee Chelsea tusiyey Ole Gunnar Solskjaer inuu yahay ciyaarrtoy uu u baahan yahay, iyadoo uu labadaba guulo ku hoggaamiyey, sidoo kalena xiddiga garoonka loo doortay.
Sida uu qoray wargeyska AS ee kasoo baxa waddanka Spain, koox ka dhisan waddanka Sucuudiga ayaa xidhiidh la samaysay Juan Mata, waxaanay u bandhigeen heshiis lacag badan ah oo mushahar ah uu ku qaadanayo, taas oo isaguna uu u sheegay inay hawl qabyo ka ahi u taallo Old Trafford oo sannadka ka hadhay heshiiskiisa uu doonayo inuu la qaado horyaalka Premier League.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray sannadkii in kooxdani ay markii hore u sheegtay in sannad qandaraas ah uu u saxeexo oo uu qaato mushahar dhan €16 milyan oo Euro, laakiin markii uu diiday haddana ay sare u qaadday lacagta oo ay ka dhigtay €20 milyan oo Euro.
32 jirkan reer Spain ayaa la rumaysan yahay in diidmada dalabkan uu lacagta badan ku xoogsanayay ay muujinayso inuu doonayo inuu sii joogo horyaalka Premier League inkasta oo wax ka yar 12 bilood oo kaliya ay ka hadhsan yihiin qandaraaskiisa Manchester United.